Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee nabad sugida ayaa xalay illaa saaka howlgal xoogan ka wada degaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho.
Boqolaal ka tirsan ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee nabad sugida oo ku hubeysan gaadiid fara badan oo kuwa dagaalka ah ayaa saaka ku waabariistay degaanka Ceelasha biyaha.
Ciidamadan ayaa dhalinyaro fara badan oo Al-shabaab lagu tuhmay ka soo xirxiray degaanadaas, iyagoo guryaha degaankaas qaarkood laga helay hub kala duwan sida dad goob joogayaal ah ay sheegayaan.
Dadka degaanka ayaa sheegaya in ciidamada nabad sugida ay saaka xanibeen intii howlgalkaas uu socday dhaqdhaqaaqa dadka iyo ganacsiga.
Wararka qaar ayaa sheegaya in howlgalkan lagu beegsanayey saraakiil ka tirsan Al-shabaab oo degaanadaas lagu sheegay ka dib markii ciidamadu uu soo gaaray war dhinaca sirdoonka ah oo arintaas la xiriira.
Ma jiro illaa hadda war ku saabsan howlgalkan oo ka soo baxay saraakiisha taliska nabad sugida hase ahaatee ciidamada sida gaarka ah u tababaran ayaa had iyo jeer sameeya howlgalo lagu beegsado dadka xiriirka la leh Al-Shabaab.